3d Mapurinda, Laser Machine, 3d Kuveza - Ecubmaker
4 Inochinjika Inoshanda Mafunduru
Yakakwira Kudhinda Yekumhanyisa & Yakakwira Kudhinda Precision
Nyora Chero Mapatani, Mufananidzo, Dhizaini Pane Zvakasiyana Zvishandiso
Dual-ruvara 3D Kudhinda
Pasina Filament Waste & Hapana Ruvara Kusanganisa
Carve, Mill Pamusoro Pane Zvakasiyana Zvinhu
8 Mazano Ekusangana Nezvako Zvisingagumi Zvinodiwa
Isu Tine Zvine Kunze Zvimiro Zvaunoda
Makona mana-Anodziya Magnetic Platform
4-mu-1 Kuchekesa Software
180x180x180 Dhinda saizi
Chii TOYDIY 4-in-1 3D Printer Unogona Kuita
Mamwe Mabasa, Dzimwe Sarudzo Kuti Uongorore
rakanyorwa naEdward Scott
Spiderman 3D Mhedzisiro
Inodikanwa Nharaunda yeVashandisi ve5000 +
Mushure mekuverenga nezve mamwe maprinta uye kugona kushandisa mamwe, ini ndinoudza vanhu kuti iyi ndiyo yakanakisa yekutanga 3D purinda kuti uwane uye udzidze.Ipapo kwira kumusoro kune yakakura printer kana kuvaka nzvimbo ishoma kwazvo. muchina uyu zvakanyanya.
Ini handina kunyanyokwegura kuti ndidzidze zvimwe zvinhu zvitsva!
My ToyDIY 4 mu1 inoshanda zvikuru!
Iwo maGoPro mount maoko akapusa zvishoma ne15% infill saka ndakaikwirisa ku50% ... zvakare yakakwenenzvera filament temp kusvika 210 C.
Ini ndakadzidza kumbomisa kudhinda nekuteedzera iyo raft pasi seyakawedzera inishuwarenzi yekunamatira pamubhedha.
Iyo laser inonyatso kupfeka imba yangu yakaita iPad kumira.
Heano mamwe madhijidhi madiki andakaronga uye kuprinda kunze: yekuwedzera tambo clip kuibata pamusoro peiyo radiator. Kutsva kutsva kunomirira keyboard yangu. Iro ndiro rinotaridzika rinotaridzika marwadzo emhasuru uye kushushikana kwekushushikana, iwe unozora poindi yekurwadziwa nekona yakakodzera yeplate.
Inodikanwa yekutenderera bhokisi remagetsi, ingo prinda imwe. Printer yakadhindwa raft mune rimwe ruvara nekuzvidzora kurodha uye kudzikisa iyo inodikanwa filament. Magnetic base inonakidza. Zvese zvinongopatsanurwa pasina kushanda.
Face Mask yakagadzirira! Anofara kugadzira chimwe chinhu chinobatsira panguva ino.
Nyowani laser chirongwa chinoita kuti ive yakanaka kwazvo uye inosuka kupisa! Ndatenda nechirongwa chakavandudzwa!
Yakasvika nekukurumidza uye praseembeled. Yakanyanya nyore kushandisa uye pamusoro pezvese ini ndiri ndapota ndapota minus ndinofunga ndinogona kunge ndichishaya imwe 3d printer musoro uye ndinoshuva dai paine zvimwe zvakadzama pakudzidza zvinhu zvine chekuita nesoftware side rezvinhu. Ini ndawedzera ongororo yangu ndega kuYouTube uye sezvaungaona iro simbe musoro inoita basa rinotyisa.
Bang pamusoro !! Kunyangwe iyi iri yangu yekutanga 3D Printer- ini handina kusangana nenyaya dzakawanda kwazvo kuti ndishande pairi. Ingotora maawa akati wandei kuti uzive nezve mana mabasa rimwe nerimwe. Waita zvese bvunzo kudhinda zvinopa pane iyo SD kadhi. Uye pamwe chete ndinogona kutaura kuti yakanyarara inonakidza.
Ndisati ndaenda kune rumwe ruzivo ini ndaida kutaura kuti- yavo yevatengi sevhisi yaive yakanaka. Ndakaonana navo kuitira kukanganisika panguva yeCNC yekugaya. Uye ivo vanopindura mukati mekanguva neakakodzera ruzivo. Ndiro basa guru!
Parizvino ndanga ndichiedza kupurinda zvakajairika uye ndiri pakati nepakati pekudhindwa kwemaawa makumi matatu. Printa yakauya nekukurumidza kubva kuamazon, uye yaive yakazara zvakanaka. Hapana chinhu chakakuvadzwa pandakavhura bhokisi uye zvaive nyore kuburitsa. Chinhu chakange chakafukidzwa nefuro kudzivirira chero kufamba, uye misoro yese yaive mukuputira furo. Zvaive nyore kuvhura futi.
Mavhiki mashoma apfuura shamwari yangu yepamoyo Molly katsi akashaya. Ini ndaida kumugadzirira chirangaridzo chake uyezve ndakazoshandisa ese matatu mashandiro eToyDIY.
Ini ndakakwanisa kushandisa purinda iyi kunze kwebhokisi pasina nyaya. Ini ndakatenga izvi muna Kukadzi wa2020 kuti ndishandise muzvirongwa zvechikoro. Hapana chandaiziva panguva iyoyo nezve 3D kudhinda, laser etching kana CNC yekuveza.
Ndakanga ndine nyaya mwedzi kana zvakadaro mukati neiyo 3D yekudhinda musoro uye ndakatumirwa kutsiva nekukurumidza zvakanyanya.
Kambani inokurumidza kupindura kumibvunzo uye nenyaya panguva yebasa muChina, saka pane kunonoka kudiki munguva dzekupindura. Asi ivo vanopindura nekukurumidza vachifunga nezve mutsauko wenguva.
Yakanaka kwazvo purinda! Parizvino yakangogadzira mapikicha emhando imwe chete, asi semavhidhiyo, takura iyo faira wobva wadzvanya bhatani. Tevere ini ndichaedza iyo laser basa.
Ndakagara ndichida 3-in-1 printer (ine FDM kudhinda, CNC kuveza, uye laser engraving) asi mazhinji emachina aya anodhura kwazvo. Saka pandakawana 4-in-1 purinda yaive yakachipa kupfuura vamwe, ndakafunga kuiendera uye ndione zvandaifunga nezvemuchina. Uye ndinofara nekutenga kwangu.
Iyo Ecubmaker 4-in-1 Printer inouya yakarongedzwa zvakanaka kwazvo. Kune akati wandei madiki, akanyorwa mabhokisi mukati mebhokisi rakakura- mukati memabhokisi aya unogona kuwana iwo mana maturusi misoro, filament, inobata filament, uye maturusi / zvikamu. Mukati mebhokisi hombe iwe unogona kuwana iyo yekudhinda muviri, yatounganidzwa. Iyi purinda inoda gungano shoma- zvese zvaunofanirwa kuita kunamatira chakakosha turu yekushandisa uye kutanga kudhinda! Ndisati ndashandisa printa, ini ndaida kutora zvakadzama kutarisa iyo printa uye chimiro.
Iko kushandiswa kwemuchina uyu kwakawanda. Ndosaka ndichida 3DPrinter yangu. Ini handifanire kunetseka nezve iyo ina basa yazvinayo futi. Uye mhando yemabasa iwayo yakanyatsonaka.
Auto yekumisikidza maficha anondibatsira yakawanda kubva pakuve nedambudziko rekudhinda. Chikuva hachimbopisa nekuda kweiyo tekinoroji inotora kupisa. Saka ini ndinogona kutora nyore nyore yangu 3D Printing ndangopedza kuripedza.
Uye chimwe chakakosha zvinhu, hachidi chero kuungana, pre-ungana muchina. Mazuva ano pane mashoma muchina anopa aya maitiro ehurongwa.
Iyo software yekugadzira inopa, zvakare yakapfuma kwazvo mune zvemukati. Ini ndinogona kugadzirisa nyore kana kugadzira modhi yangu neecubware software.
Ini ndichakurudzira munhu wese kuti atenge uyu muchina, seyayo yakachipa kwazvo nekuenzanisa nemijenya yekumberi ficha uye mabasa.
Yakashanda zvakanaka! Zvese zvakasvika zvakanaka sekushambadzirwa. Parizvino yaita Laser yekunyora zvakanyanya uye ichinyatso kuda mhedzisiro kubva kumuchina uyu mudiki. Ini ndaunza imwe muraraungu mutsetse pamberi pekuti purinda yangu isatumirwe. Kwenguva yekutanga kushandiswa kwakawana mhedzisiro yakanaka. Ndinovimba pane zvakawanda zvekutsvaga nekudzidza.
Kutsvaga 3d printer yekutengera zuva rekuzvarwa kwemwanakomana wangu. Tora mazuva akati wandei kusarudza uye pakupedzisira uunze iyi 4in1. Chaizvoizvo zviripo! Ndakashanda mavhiki akati wandei kuyedza imwe 3d kudhinda uye laser mamwe eangu huni makiyi. Ndakawana laser inonakidza kwazvo kushandisa, kunyangwe ndichifambisa purinda yangu kugaraji rangu kuti ndiwedzere kuchengetedzwa!
Ndoita yangu yekutanga chirongwa ne Toydiy 4in1. Akadhindwa akati wandei zvikamu uye vakaungana pamwechete. Kunyangwe kumwe kutadza kuteedzera nekuda kwenzvimbo dzekugadzirisa, asi mushure mekukurukurirana kudiki nerutsigiro yakagadziriswa. Pakazara ndinoda iyi printer.
Ecubmaker Set chikepe kuzadzisa chiroto chevagadziri. Seimwe yekambani yekutanga yekumbomira mberi kugadzira Multi-inoshanda 3D Printer, EcubMaker yakarumbidza hunyanzvi hwayo uye hwakawanda mhando.
Kubva pakuvambwa kwedu muna2013, Tinogadzira akasiyana emhando yepamusoro desktop desktop yemaprinta akateedzana seFantasy. Mushure mekuwana budiriro pane yeFantasy dzakateedzana chinangwa chedu chakatevera kwaive kugadzira chimwe chinhu chinogona kuzadzikisa kudiwa kwevagadziri vanoda kuve nemuchina unogona kuita akawanda mabasa. Zvakare izvo zvinogona kuchengetedza mari uye nguva yekuchinjisa muchina kumuchina. Pakupedzisira, takazosvika patakananga. Muna 2019 Isu tinotangisa yekutanga yepasi rose 4-in-1 3D Printer inonzi: TOYDIY 4-in-1. Izvo zvaisanganisira FDM imwechete color, FDM huviri color 3D Kudhinda, Laser yekuveza, CNC kuveza neumwe hunyanzvi maficha.
Tine nhengo dzinopfuura gumi muchikwata cheR & D. Ivo vese vanoteedzera kurota kuti vagadzire chimwe chinhu kune vakajairika vatengi kune akajairwa vatengi. Ivo vakatsunga kugadzira chimwe chinhu chingashandiswa nemudzidzi weKoreji. vezera repakati vabereki kana kunyange hobbits pamudyandigere. TOYDIY 4-in-1 ndiyo muenzaniso wakakwana wekuratidzira kuzvipira kwavo. Iko kuvandudzwa kwehunyanzvi zvese-mune imwechete software kwaive kwakaomera kukuru kwavari. Mushure mekunge tapfuura neimwe nhanho yakaoma isu takazviita. Pari zvino TOYDIY yakanyatsogadziriswa akawanda-chishandiso 3D Printer iyo inokunda yakawanda yevanoda tech moyo.
Kuenderera mberi nemupiro uyu paindasitiri yekudhinda ye3D uye nekusimudzira kwayo tinovimbiswa kupa zana muzana. Tiri kushanda kuita kuti hupenyu hwevashandisi huwedzere uye nyore. Tinoda kuti iwe uuye nesu uye uve mumwe wedu anotenda mukuvandudza uye shanduko kuvanhu.
Patent uye Kopa Kodzero